FastPay Casino - Isiza esisemthethweni, ukubhaliswa 2021
FastPay Online Amakhasino
Imininingwane eyisisekelo mayelana ne-Fastpay portal
Ingosi ebonakalayo ye-Fastpay Casino yasungulwa muva nje - ehlobo lika-2018. Esikhathini esifushane kangaka, isayithi lizuze ngempumelelo idumela eliqinile kanye nezithameli eziningi zamakhasimende ajwayelekile, aqhubeka nokukhula. Abahleli bagxile ekunikezeni imidlalo enobulungiswa futhi esobala, eheha abagembuli futhi ibavumele ukuthi babe nenjabulo yangempela ezikhungweni eziku-inthanethi.
I-Fastpay Casino isebenza ngaphansi kwelayisense enenombolo yokubhalisa engu-8048/JAZ2020-013 futhi isebenza ngeDama NV, esebenza ngaphansi kwegunya leCuracao. Yize isencane, ifakiwe kuhlu lwamakhasino aku-inthanethi amahle kakhulu. Lesi isiqinisekiso sokuphepha nokungakhethi, ngakho-ke nabasebenzisi abangenalwazi abesabi ukukhetha iwebhusayithi yayo esemthethweni yesikhathi sokuzilibazisa esivusa amadlingozi.
Umqondo wekhasino ugxile ekunikezeni amakhasimende ngamadiphozi asheshayo nokuqinisekiswa kwe-akhawunti okulula. Abasebenzisi baqinisekisiwe ukuhoxiswa okusheshayo kwezimali eziwinile kanye nokuqinisekiswa okunethezeka. Ukulandela izitayela zesimanje, i-Fastpay yekhasino inenguqulo ephathekayo, kanye nezibuko ezisebenza, ezandisa kakhulu amathuba okugembula. Phakathi kwabalingani beklabhu, ungabona abahlinzeki abadumile emhlabeni abesebenze embonini yokugembula iminyaka engaphezu kwamashumi amabili.
Abavakashi besiza babona isimo esimnandi sewebhusayithi esemthethweni kanye nendawo elula yamabhulokhi ayo asebenzayo. Amabhanela agqamile amiselana , abonisa izivakashi namalungu abhalisiwe eklabhu ye-FastPay Casino yonke imininingwane edingekayo, kanye nokuvusa intshisekelo kulokho okwenzekayo ezindongeni zayo ezibonakalayo.
Ikhasi eliyinhloko liqukethe amathebhu wokubhalisa, ukungena ngemvume nemenyu. I-interface enamaqoqo enengqondo yenza kube lula ukuzulazula ngisho nakwabaqalayo. Abagembuli abavela emazweni ahlukene bazozizwa bekhululekile emakhasini ayo, ngoba ilungiselelwe inombolo enkulu yezilimi ezahlukahlukene:
ISpanish, iSweden, isiNorway, isiFinnish, isiMalay, isiKazakh, isiTurkey, isiFulentshi, isiCzech, isiJapane nezinye eziningi azisebenzi kangako.
Isitayela sewebhusayithi esemthethweni ye-Fastray sihlukaniswa ngemibala egqamile, ngakho-ke siyajabula. Ukuntuleka kolwazi olungadingekile nokuklanywa okuhle kukuvumela ukuba ubalekele ngokushesha ezinkingeni zansuku zonke, ungene shí ezinhlobonhlobo zokuzijabulisa zokugembula.
Ngaphandle kokuthi ukubhaliswa kuwebhusayithi esemthethweni ye- Fastpay Casino kuyadingeka kuphela kulabo abathathe isinqumo sokuba yilungu elisemthethweni leklabhu futhi baqale ukudlala imali yangempela, abasebenzisi bayakujabulela lokho. Ukubhaliswa komsebenzisi :
kukhombisa izinhloso ezibucayi zomgembuli;
ivumela amaklayenti esayithi ukuthi ajabulele amalungelo amaningi, njengamabhonasi, ama-spins amahhala, ukukhushulwa, ukubuyiselwa kwemali;
kukhombisa ukuthi ilungu elisha leklabhu liyavumelana nemigomo yengosi futhi selifinyelele eminyakeni yobudala.
Ukwakha i-akhawunti yokudlala ekhasino, vele ufake isiza sesayithi bese ucindezela inkinobho yokubhalisa. Kuthatha isikhashana futhi kusho:
ukugcwalisa iphrofayili yomsebenzisi ngephasiwedi nekheli le-imeyili;
ukukhetha imali ye-akhawunti;
isiqinisekiso sokutholwa kwesikhangiso ngendlela yokuthumela ngeposi;
ukutadisha imithetho nezinqubomgomo zesikhungo;
ukuqinisekiswa kokufaneleka kwebhokisi leposi.
Iphuzu lokugcina lenziwa ngokuchofoza kusixhumanisi sokuvula, esisencwadini evela ekuphathweni kwengosi. Njengoba esengumnikazi we-akhawunti yomuntu siqu ekhasino le-FastPay, umgembuli uya esigabeni esithi "Iphrofayili yedatha" bese egcwalisa yonke imikhakha edingekayo ukuze abaphathi babe nolwazi ngomdlali.
Ukuziqhenya kwesiza ukukhetha kokuzijabulisa okukhulu. Okudume kakhulu yimishini ye-slot, kepha lapha ungathola futhi:
amatafula nabathengisi ababukhoma.
Ihholo lokugembula iFastpay linezindawo ezingaphezu kwama-2500. Zethulwe ngabathengisi abangamashumi amane, okudume kakhulu kubo yile: Evolution, NetEntertainment, Microgaming, Yggdrasil Gaming, Playtech, Endorphina, Play N 'Go, Igrosoft, Nextgen, njll Okucacile kwazo zonke izindawo ezikulesi sikhungo yikhwalithi yazo ephezulu nokuphana.
Imenyu yegumbi lamageyimu:
Slots - isigaba esinemishini ebonakalayo;
okusha - zonke izikhala ezisanda kukhishwa ngabahlinzeki futhi zavela kukhathalogi yesayithi;
bukhoma - imidlalo engaphezu kwengu-150 enama-croupiers wangempela;
i-roulette ingukuzijabulisa okudala kwanoma iyiphi i-casino;
thenga ikusasa - isoftware enekhono lokuthenga imisebenzi yebhonasi;
Amadivayisi athandwa kakhulu yi-Book Of Fastpay, i-Crazy Halloween, ama-Aztec Pyramids, ama-Dolphins Gold, ama-Diamond angu-777, izithelo nezidayimane, i-Jungle Treasure, i-Book Of Tribes, njll. Kubasebenzisi bonke abangenalo ulwazi oluningi, kunethuba lokudlala mahhala e-Fastpay casino . Idemo ayidingi ukubhaliswa noma izimali kwidiphozi.
Ngokushesha ngemuva kokuvulwa, isayithi linikeze amakhasimende alo ibhonasi eyamukelekile yokuqedela ukubhaliswa, kepha namuhla lelo thuba likhishiwe ohlwini lwamalungelo. Esikhundleni salokho, amalungu amasha athola iphakethe lokwamukela. Kwenza kube lula ukugcwalisa idiphozi ngokwemibandela evumayo.
Ekuqokeleleni kokuqala, ubukhulu besipho esivela ekhasino buzoba yi-100% futhi buzokwengezwa nge-100 FS yamahhala. Ngesikhathi sediphozi yesibili, iklayenti lizothola ibhonasi ka-75% wemali efakiwe ku-akhawunti. Inani eliphansi lezimali zokwenza idiphozi kwidiphozi yokuqala yi-1000 RUB, 20 EUR, 20 USD, 8800 DOGE, 0.05 ETH, 0.002 BTC, 0.4 LTC, 0.096 BCH. Isikhathi sokubheja yizinsuku ezimbili. Kulokhu, ukubheja kungu-x50.
Kumakhasimende ajwayelekile, kusebenza izimo ezikhethekile. Uhlelo lwe-VIP luqukethe amazinga ayi-10 futhi lubandakanya inani elikhulu lezipho ezahlukahlukene ezimnandi, okunikezwayo okuhle nokubuyiselwa imali.
Ukuze kube lula, ungagcwalisa idiphozi bese ukhipha inzuzo ngohlobo lwemali olulandelayo: RUB, USD, EUR, NZD, CAD, AUD, PLN, NOK, JPY, ZAR, BTC, BCH, LTC, DOGE, ETH. I-Fastpay casino yamukela i-cryptocurrency, ekhulisa kakhulu ukuheha kwayo emehlweni ezivakashi, ngoba ayikhokhiswa intela.
Ukuhwebelana ngezezimali kwekhasino ye-Fastpay kwenziwa cishe yizo zonke izinhlelo zokukhokha ezithandwayo. Izindlela ezithandwa kakhulu zokufaka imali yilezi: Visa, Mastercard, Maestro, Webmoney, Ecopayz, Neteller, Mifinity, Skrill, Muchbetter, Transfer Rapid, EcoVoucher, Neosurf, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether.
Amarisidi enziwa ngokushesha futhi awadingi ikhomishini, ngaphandle kweWebmoney. Inani lokugcwaliswa kabusha kwediphozi liyahlukahluka ebangeni kusuka ku-10 kuye ku-4000 EUR/USD. Ku-cryptocurrency, inkokhelo encane izoba yi-0.0001 BTC, i-0.01 ETH, i-0.01 LTC, i-1 DOGE, i-0.001 BCH.
Ungakhipha inzuzo usebenzisa i-Webmoney, i-Ecopayz, i-Neteller, i-Skrill, i-Muchbetter, i-Rapid transfer, i-Mifinity, i-Bitcoin, i-Litecoin, i-Ethereum, i-Dogecoin, i-Tether. Inqubo yenziwa ngaphandle kokuthunyelwa futhi ithatha amahora amabili. Ukuqinisekisa ubunikazi, umsebenzisi kufanele enze inqubo yokuqinisekisa.